Magaalo Joogis Bay Kaa Rabtaa – Maxaa Dhacay? | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Caawinta Xaaskaagu Waa Furaha Nolosha
Uurka iyo Biyo Cabidda
Ilhaan Ciise Maxamed, October 27, 2018
Afrika Iyo Hoos u Dhacii Dhaqaalaha Adduunka: -Dersi ku dayasho mudan
Cabdijabaar Sh. Axmed, March 8, 2017
Qiso macaan: Ragaba Wuu Wada Rartee Miyuu Kaliday i Ritay!
Dhiig baxa Imaado Dhalmada ka hor( Antepartum Harmorrhage)
Abshiro Axmed Cabdi, July 17, 2019
Suldaan Nayruus — January 30, 2019
Shalay galab ayaan waxaan soo raacay Bajaaj. Waxaa waday Bajaajtaasi nin garmadow ah oo markaasi jaad takhsiinnaa. Ka warrama haddii ay ishelaan nin war jecel iyo nin marqaansan? Sheeko qiso iyo qosol isugu jirtay ayaannu dhex dabaalannay. Annaga oo ay noo baxayso ayaa waxaa gadaal nooga yimid gaari Cabdibile ah oo ay ku dhoobnayeen askar hubaysan. Haddii aad Soomaaliya joogto, ma Cabdibile ayaa la hor socon karaa?
Marka hoonkiisa la maqlo ayaa la kala haadaa! Cabdibilihii foori ayuu intaa nala dabajoogaa, annaguna lama soconno oo adduun kale ayaannu ku jirnaa. Sidii uu noo daba socday oo uu sheellare iyo hoon isugu darayey, qolo kale ayaa inta meel uu maro siisay, ayuu inta xiin nagu dhaafay, jidkii bartankiisii noo istaagay.
Hal mar baa waxaa Cabdibilihii ka soo daatay 11 askeri oo qoryahoodii oo dhegta ka jarantahay la soo booday. Waxa ay doonayeen in ay feer iyo laad iyo bugayn kala daalaan darawalka Bajaajta. Waa nagu yimaadeen, kolkaas baa kii ugu horreeyey ninkii shaatiga inta qabtay oo uu baad ku dhuftay ʻsoo dego najisyahow najisku dhalay` yiri. Ninkii markii uu arkay meesha xaal marayo, ayuu waxa uu isla markiiba ku dhawaaqay,
“War yaa tol aheey, war yaa reer hebel aheey!” Nimankii soo yaacayey, intoodii badnayd isla markiiba gadaal bay u hakadeen.
Ninkii shaatiga ku dhegganaa ee mar quriga ku dhuftayna, mid baa inta ku soo haaday oo gacanta ka qabtay, ku yiri, “War bal sug, …, waryaa soo ninka ma aragtid, waa in oday ah oo masʻuul ehe, sideed ula dhaqmaysaa?” War yaanan kugu daaline, ninkii waa la raalligeliyey waxaana xaalmarin loo siiyey qeyb qaad ah oo ah waxa ugu qaalisan, waxa ay malleeshiyo bixiso.
Ninku qoladu uu sheegtay ma ahaa?
Markii ay nimankii naga tageen baan ninkii isaga oo qoslaya waxa uu hadal iiga bilaabay, “Magaalo joogis bay kaa rabtaa.” Inta yaabay ayaan waxa aan weydiiyey, waxa uu ka wado. Waxa uu ninkii ii sheegey in uusan ahayn qolada uu ku hayey ʻyaa reer hebel aheey. Isaga oo hadalkii ii wada ayaa waxaa uu igu yiri, “Saaxiib, waxa aan kala bartay lahjadaha ciidanka Faradheerta, marka hadba qoladii igu aabyoota, marka aan lahjadooda dareemo ayaan u habarwacdaa qolada aan u maleeyo. Waana ku faa`iidaayoo, waatan aan haddaba kaga badbaaday, kuna helay jeex jaad ah.”
Magaalo joogis bay kaa rabtaa
Ninkaasi, waxa aan siiyey lacagtii aan kula soo heshiiyey maantaas laba jibbaarkeed, sababta oo ah; waxa aan ka bartay xikmaddan ʻ Magaalo joogis bay kaa rabtaa. Insha Allahu, waan ku dhaqmi doonaa hadda kabacdi.
Tags: Magaalo Joogis Bay Kaa Rabtaa
Next post Waa Maxay Cudurka Macaanka Iyo Caawaqib Xumada Ka Dhalan Karto?
Previous post Kaarbohaydaraytis-ka "carbohydrates": Cuntooyinka Tamarta leh Maxaa Ugu Muhiimsan?